Maalinkuu Jahli I Waaniyay | Doodwadaag waa Danwadaag.
Maalinkuu Jahli I Waaniyay
Magacaygu waa Waddani. Dalka waan jeclahay. Sawirka Facebook iigu jiro waa haldoorka reerka. Funaanadda aan xir nahay waa isaga. Waa nin karmeed aan ku kalsoonahay inuu hoggaamiyo dalka. Waxaan hadda ka imid shir uu haldoorku ka khudbeenayay. Waan jidbooday. Jiriiricooday. Rajo i gashay. Saa anigoo waddaninimo la jidbeysan ayuu shirkii dhammaaday.
Waxaan u soo lugeeyay gurigeyga. Waxaan arkay saddex aan ifka u nebcahay oo isla fadhiyay waddada geeskeeda. Waxay kala ahaayeen Jahli, Faqri, iyo Tahriib. Runta ayaanse u sheegay: “Jahliyow adigaan dunida kuu nebcahay,” ayaan iri anigoo kalsooni isku qabo. “Dal nimco leh baan degganahay, misana adiga dartaa ayay dadkaygu u garan la’ yihiin nimcada hoos taal.”
Jahli oo i inkirayo ayaa yiri, “Naceybka waa layga sii mudan yahay.”
Uma aan jawaabinee waxaan sidoo kale eedeeyay Faqri: “Faqriyow adigana waan ku nebcahay,” ayaan iri. “Waxaad ina badday gaajo. Dhaqan-xumada aad dadkayga bartayna waxaa ka mid ah inay ku qancaan kaalmo shisheeye iyo deeq ka timid beesha caalamka.”
Faqri oo iska kay yureenayaa yiri, “War shaqo yeelo. Hadal waa intuu yiri aabbahay Jahli.”
Intaan haraanti ciid ah ku laaday wejigii Faqri baan iri, “Dulliyahow iga aammu.”
Saa waxaan dul imid Tahriib. Waxaana igu soo istaagtay illin. Wuu i eegay isaguna, weliba sidii inaan dembi ka galay ii haruufay.
Waxaan damcay inaan canaanto. Mise codkii ayaa igu xirmay. Sidii qof ceegi lagu dhegay ayaan gunuunacay: “Tahriibow weli ma’aan hilmaamin oohinta hooyadey maalinkii aad wiilkeeda harraad ugu dishay saxaraha Liibiya; weli ma’aan halmaamin maalinkaad asaay u saartay walaashey ee aad ninkeeda hirarka badda ku maansheesay; weli ma’aan hilmaamin dhallinyarta aad gacanta u gelisay badda geerida iyo dad-qalka la baxo kelyahooda.”
Waan is celin waayay, oo oohin baan la qaar qaadmay.
Tahriib oo igu jeesjeesayo ayaa ii il jebiyay: “Waddaniyow oohinta cayaarta ka daa,” ayuu yiri. “Hadalna waa intuu awoowgey Jahli yiri.”
Anigoo ka careysan Jahligan hadba laygu soo hal qabsanayo ayaan ku soo noqday Jahli. Wuu fadhiyayee kor ayuu u soo hinqaday. Oo sidii inuu ila dagaallamayo ii soo dhawaaday. “Waddaniyow i maqal,” ayuu yiri Jahli. “Aniga iyo firkaygaba waad na neceb tahay. Kaaga sii daranee ciil ayaadba la ilmayneysaa. Xaqiiqduse waxay tahay, ciilka iyo naca aad noo qabtid waxaa naga mudan ninkaas aad ‘hal-doorka reerka’ u taqaan ee aad u jidbeysan tahay siyaasaddiisa; ee aad meel walba sawirkiisa ku dhejisay; ee aad u ololeynaysid inuu noqdo hoggaanka dalka.”
Intaan sii carooday ayaan Jahli ku boobsiiyay dhowr feer, oo aan labada daan ka tumay. “Beenlow,” ayaan iri anigoo xuurtoonayo, “beenlow bakhtiga ka liito. Qurun. Sharlow. Maxaad hal-doorkeenna ku maagtay?!!”
Jahli ayaa igu qoslay halkii uu ila dagaallami lahaa. Wuxuu igu yiri, “Wiilyahow miskiin baad tahay. Adigoon dhalan baan marqaati ka ahaa wuxuu falay hal-doorkaagu. Aan ku sir-warramee hal-doorkaagu waa dhagar-qabaha dalkaaga u diiday horumar; hal-doorkaagu waa daneystaha dalkaaga hoos geeyay talo shisheeye; hal-doorkaagu waa diridiraalaha kala fogeeyay bulsho walaalo ah; hal-doorkaagu waa hooyada faqriga iyo tahriibka; hal-doorkaagu waa midka ku baday jahliga iyo in aad ismooddid Waddani quman. Hal-doorkaagu waa midka kaa dhigay qof ay dunidu ku maadaysato.”
Markuu intaa yiri Jahli ayaan shakiyay. Sheydaankuba mar buu run sheegee waxaan is iri bal gacan-ka-hadalka jooji, oo dhuux hadalka Jahli.
Saa Jahli oo hadalka sii wataa yiri, “Ciilka iyo naceybka aad aniga iyo ehelkayga u qabtid wiilyahow ku jihee daneystaha aad u taqaanid ‘hal-door.’ Isaga ayaa ugu sii mudan. Sidoo kalena bal daneystaha xor ka noqo, ciriirigana waasac uga bax. Markaad daneystahaas xor ka noqotidna ogow taasi waa billowga guusha. Ha hilmaamin faqri iyo tahriib waa iska duruufo — duruufina ma waarto, oo waqtiga ayaa malaggeeda ah. Keliya un ka xorow daneystaha facaaga kaa reebay — taageerna dal-dhiska hiraalkiisu yahay qurxinta aayahaaga iyo cirib-tirka caqabadaha ku hor yaalla.”
Hadalka ayaa igu xirmay. Waxaan Jahli kula doodana garan waayay. Intaan yaxyaxay, ayaan socodka boobay anigoo madaxa hoos u ritay.
Qore: Cabdullaahi Janno.